Covid-19 - Ireo tànana folo voalohany haolo mahatalanjona indrindra mandritra ny fihiboana**
Covid-19 – Ireo tànana folo voalohany haolo mahatalanjona indrindra mandritra ny fihiboana**
Publié mars 31, 2020 par Book News
**(lahatsoratra nosoratana tamin’ny omaly alina tamin’ny 11 ora)
Hita fa niha-niparitaka hatrany ny tsimokaretina Covid-19 ary efa mitombo isa ireo firenena mandray fepetra hentitra amin’ny fihiboana. Toa lasa haolo tanteraka ireo tànana anisan’ny naresaka indrindra maneran-tany, na tànana eropeanina izany na tànana afrikanina, na amerikanina, na asiatika. Tsy misy intsony ny tànana manan-karena sy an-dàlam-pandrosoana fa mitovy tantana izao izy roroa manoloana ny fihiboana.
Anisan’ireo lalàna be mpampiasa indrindra any Rôme, tsy misy olona intsony ankehitriny. (Sary : Massimo Pinca / Reuters)
Renivohitr’i Italia, anisan’ny voakasiky ny fiparitahan’ny tsimokaretina Covid-19 tao aorian’ny Chine. Mitentina 10 779 eo ho eo ny isan’ny olona matin’io tsimonkaretina io ankehitriny, ary manodidina ny 97 689 ny tarehimarika azo farany tanatin’izany.
Zara raha misy olona ny lalana any pekin. (Photo : Tomas Peter / Reuters)
Renivohitr’i Chine, anisan’ny tànana be mponina indrindra ihany koa satria dia manodidina ny 21 tapitrisa ny olona monina any. Nanjary nangina tanteraka ity renivohitra ity. Mihidy aman-trano avokoa ny olon-drehetra mba hisorohana ny fiparitahan’ny tsimonkaretina Covid-19.
Ny tetezan’i Westminster, anisan’ny ahitana fitohanan’ny fifamoivoizana indrindra any an-toerana, nefa haolo tanteraka ankehitriny. (Sary: Hannah McKay/ Reuters)
Toy ny tànana rehetra dia ahitana fitohanan’ny fifamoivoizana ihany koa raha i Londres. Kanefa ankehitriny dia foana sy haolo tanteraka hatramin’ny tetezan’ny Westminster. Azo lazaina fa somary mitavozavoza ny fandraisan’andraikitr’ireo manam-pahefana kanefa dia manam-pahendrena tanteraka ireo Britanika amin’ny fandraisana fepetry ny fihiboana tanteraka.
Anisan’ny toerana be olona foana eny amin’ny morondranomasin’i Bombay, saingy niova izany hatramin’ny nanombohan’ny fihibohana. (Photo : Francis Mascarenhas / Reuters)
Renivohitr’i Inde, anisan’ny voakasik’izany fihiboana izany ihany koa. Raha ny mahazatra hatrizay dia ipoka olona tanteraka ny moron-dranomasin’i Bombay, ankehitriny anefa dia mangina tanteraka izany, ny firondroan’ny ranomasina sy ny rivotra mitsoka no sisa re sy tazana. Nandray fepetra hentitra ireo manam-pahefana ny amin’ny famefena ny mponina tsy hifamezivezy intsony.
Tsy ahitana olona intsony ao Chinatown, toerana anisan’ny be olona indrindra any New York. (Photo : Johannes Eisele / AFP)
Tànana amerikanina kalaza indrindra, feno mponina maro loko sy fihaviana. Noho ny fiparitahan’ny tsimokarentina hatrany dia lasa haolo tsy ahitana olona intsony raha ny Fokontanin’ny Chinatown any Manhattan. Mihidy avokoa ireo toeram-pivarotana eny an-toerana, tsy misy olona mivezivezy intsony ny tànana.
Haolo tanteraka eo amin’ny Palais royal de Bruxelles, toerana anisan’ny be olona indrindra any an-toerana. (Photo : EPA)
Manatanteraka an-tsakany sy an-davany ny fihiboana tanteraka ireo mponina any Bruxelles hany ka na ny toerana malaza sy be mpitsidika indrindra toa ny “Palais royal de Bruxelles” dia mangina tanteraka, tsy ahitana olona mivezivezy na dia iray akory aza.
Anisan’ireo lalana be mpampiasa indrindra any Madrid ity lalana ity, nefa dia haolo tanteraka ankehitriny. (Photo : EPA)
Any amin’ny Renivohitr’i Espana dia omena toromarika mazava sy hentitra ny mponina amin’ny fihiboana. Miisa 8 000 ankehitriny ny olona efa matin’izany tsimokarentina Covid-19 izany. Ireo mpiandraikitra mahefa rehetra no hany sisa afaka mifamezivezy eny rehetra eny, manara-maso ny fanajan’ireo mponina izany fepetra izany.
#8 La Mecque
Sarin’i La Mecque izay tsy fahita matetika. Mihavitsy ireo olana manao fivahinianana masina noho ny fihiboana. (Photo : Abdel Ghani Bashir / AFP)
Toerana anisan’ny be mpitsidika ihany koa raha La Mecque, any Arabia Saodita. Manoloana ny fiparitahan’ny tsimokaretina anefa dia nandray fepetra ihany koa ireo manam-pahefana ny amin’ny tsy tokony hivorivoriana intsony.
Tsy misy mpitsidika intsony ny Tour Eiffel, any La Frantsa. cc: www.ouest-france.fr
Renivohitr’i La Frantsa lasa nanjary haolo ihany koa. Mba hisorohana hatrany ny mety hiparitahan’ny tsimokarentina COVID-19 dia nanantanteraka fihiboana ny 17 martsa lasa teo izy ireo. Ankehitriny dia efa mihoatra ny 140 000 ireo olona efa sitran’ny tsimokaretina noho ny fanajana ny fepetra sy ny fihiboana tanteraka.
Haolo tanteraka ny Fokontanin’i Behoririka hatramin’ny nanombohan’ny fihiboana teto Antananarivo. cc: Polisim-pirenena
Tafiditra anatin’ireo folo voalohany, tànana afrikanina anisan’ny nametraka ny fihiboana ihany koa raha i Madagasikara. Miasa andro aman’alina ireo mpitandro ny filaminana mba hanara-maso ny fanajan’ireo mponina izany fihiboana izany. Hita fa miha-mangina tsikelikely isan’andro ireo tànana manerana an’Antananarivo. Miisa 43 ny olona hita hatreto fa mitondra ny tsimonkaretina Covid-19.
Publié dans Actualités et Malagasy